ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သင်စိတ်ညစ်ရမည့်အချက်များ - Lu Gyi Min - Cell Phone Villa
ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သင်စိတ်ညစ်ရမည့်အချက်များ
ကွန်ပျူတာ အများစုက လူကို အလုပ်ပိုရှုတ်စေပါတယ်။ကွန်ပျူတာက လာနေတဲ့ အလုပ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အီးလ်မေးတွေ နဲ့ အခြားသော ပြဿနာပေါင်းစုံအတွက် ဖြေရှင်းပေးရပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့ ကွန်ပျူတာမသုံးဘူးဆိုရင်တော့ ဒီဒုက္ခတွေက ကင်းလွတ်ပါလိမ့်မယ်။
ကွန်ပျူတာ အသုံးပြု သူဟာ ကျွမ်းကျင်အဆင့်မဟုတ်ဖူးဆိုရင်တောင်မှာ ဗိုင်းရပ်တွေ ရဲ့ အန ္တရာယ်တော့ သိထားသင့်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာတိုင်းလိုလို ဗိုင်းရပ်ကူးနိုင်ပြီး ကွန်ပျူတာကို ပိတ်ပစ်တဲ့ အထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်ကို အင်တာနက်လိုင်းတွေ နဲ့ မန်မိုရီစတစ်တွေ ကနေတစ်ဆင့် ကူးလေ့ ရှိပါတယ်။
3. Computers Break to Easy
ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့ ဒက်တော့ ကွန်ပျူတာ(စားပွဲတင်) တွေ အတွက် ကတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်းမပြောနိုင်ပေမဲ့ လက်တော့ ကတော့ ထိခိုက် လွယ်ပါတယ်။ဥပမာ - တစ်စုံတစ်ယောက် ကြောင့် ရေစို သွားမည်ဆိုပါစို ၊ဒါဆို လက်တော့ ကွန်ပျူတာရဲ့ မားသားဘုတ်လောင်သွားနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်က ဖိမိ ၊တိုက်မိတဲ့ အတွက် ကွန်ပျူတာ ရဲ့ မှန်တွေ ကွဲ ကြေတတ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ ရဲ့ အပြင်ပိုင်း ဟက်ဝဲလ်ပိုင်း ပြဿနာတွေ ကလည်းသုံးစွဲ သူကို ပြဿနာဖြစ်စေပါတယ်။ဥပမာ -ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့ မားသားဘုတ်ပြဿနာဟာလည်း ထူးဆန်းနေတတ်ပါတယ်။တစ်ခါတလေ အ
ဆင်ပြေချင်ပြေမယ်။တစ်ခါတလေ သုံးလို့ ရချင်လည်းရတတ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာတွေ မှာ ဆော့ ဝဲလ်တွေ ပြဿနာတတ်ရတဲ့ အကြောင်းအနည်းငယ်ရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာ ဟာ ပြုပြင်ရေးဝန်ဆောင်မှု ကလည်း တစ်ခါတစ်ရံ ဖြေရှင်းပေးလို့ မရပါဘူး။ဥပမာ အနေနဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့ ဟက်ဝဲပိုင်း(သို့ မဟုတ်)အော်ပရေးတင်းစနစ်နဲ့ ကိုက်ညီမှု မရှိတဲ့ ဆော့ ဝဲလ်တွေ ဟာဆိုရင် သုံးစွဲ သူကို ဒုက္ခအကြီးကြီးပေးပါလိမ့်မယ်။
6. Computers Change to Fast
ကွန်ပျူတာတွေ နဲ့ နည်းပညာတွေ ကတော့ အပြောင်းအလဲမြန်လွန်းနေပါတ်ယ။တကယ်တော့ ကွန်ပျူတာ အသစ်ဝယ်တယ်ဆိုရင် လူတွေ အနေနဲ့ မကြာခင်မှာ ကွန်ပျူတာအသစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာသုံးသူအနေနဲ့ ဟက်ဒစ်တွေ ၊ရမ်တွေ နဲ့ အော်ပရေးတင်းစနစ်တွေ အတွက် လိုအပ်သလို ပြန်လည် ပြု ပြင်ရတာမျိုးပြုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
7. Computers can be Addictive
ကွန်ပျူတာတွေ ရဲ့ ထူးခြားချက်က ဆွဲ လန်း စေတတ်မှု လည်းရှိပါတယ်။အများအားဖြင် လူတွေ ဟာ စွဲလန်းမှု လို့ ပြောတာနဲ့ မူးယစ်ဆေးစွဲ လန်းတာကို ပြေးမြင်တတ်ကြပါတယ်။အဓိကအားဖြင့် ကွန်ပျူတာ ဂိမ်းတွေ ဟာ အလွန်ကို စွဲလန်းစေပါတယ်။
ကွန်ပျူတာတွေ ဟာ ရုပ်ဝတ္တု ပိုင်းနဲ့ ဆော့ ဝဲလ်ပိုင်တွေ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အတွက် အော်ပရိတ်တင်းစနစ်ကတော့ ပါရှိရပါတယ်။လျှပ်စစ်ပြတ်တော်တာမဟုတ်ပဲလျှက် ကွန်ပျူတာရဲ့ ဟက်ဝဲလ်ပိုင်း ဖြစ်စေ၊ဆော့ ဝဲလ်ပိုင်းဖြစ်စေ တစ်ခုခု ချို့ ယွင်းတာကြောင့် ကွန်ပျူ တာဟာ လျှပ်တပြတ် ရပ်တန့် သွားနိုင် ပါတယ်။လက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့ ဝင်းဒိုးစနစ်၊အော်ပရေးတင်းစနစ်သစ်တွေ မှာ ကွန်ပျူတာအတွက်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ အခိုက်အတန့် မှာ ရပ်တန့် သွားလျှင် အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဖိုင် စနစ်တွေ ကို အလိုလျောက်သိမ်းဆည်ပေးတဲ့ နည်းပညာတွေ တော့ ပါရှိလာခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ ကွန်ပျူ တာတွေ ဟာ အကြောင်းပြချက်မရှိလျှပ်တပြတ် ပိတ်သွားတတ်ပါတယ်။အများအခေါ်တော့ စက်လေးသွားခြင်း လို့ ခေါ်ကြတာပါ။
9. They need electricity
ကွန်ပျူတာပစ္စည်းတွေ ဟာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်တာကြောင့် သူတို့ ဟာ လျှပ်စစ်ဓာတ် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ ကတော့ လျှပ်စစ်မီးမကြာခဏ ပြတ်တောက်တတ်တာကြောင့် အဲ့ဒီကိစ္စဟာ စိတ်ပျက်စရာဖြစ်တတ်ပါတယ်။
More in this category: « သင်မသိသေးတဲ့ တစ်ပတ်အတွင်း မိုဘိုင်းလ် သတင်းများ TV တွေမရှိ ဖုန်းတွေမရှိ ဟိုး...အရင်ကလေးဘဝကို အလွမ်းပြေစေမယ့် မိခင်တဦးရဲ့ လက်ရာမှတ်တမ်းတွေ »